हेर्नुस् ! ६५ वर्षको बूढो उमेरमा विवाह गरिन्,अहिले श्रीमानले यतिसम्म गरेर छोडी हिडे (भिडियो हेर्नुस्) - ABNews Nepal
Nov 20, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, dhamala ko hamala, headline nepal, kapurbot tv, katathmandu news, latest khabar, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
बुढेसकालमा एक अर्काको साहारा हुन्छ भन्ने बिबाहित जोडिहरुको एउटा सोच हुने गर्दछ बिबाह गर्दा । तर बुढेसकालमा नै बिबाह गर्दा पनि एक महिला अहिले एक्लै भएकी छिन । बुटवलकि राममाया सुनुवारले करिव ६५ वर्षको उमेरमा साहारा हुन्छ भन्ने सोचले बिबाह गरिन । तर जो सगँ बुढेसकालमा साथै भैइन्छ भन्ने सोचले बिबाह गरिन उसैले बिबाह गरेको केही दिनमा नै छोडेर गए पछि उनी अहिले मिडियामा आएकी छिन । राममाया र कृष्णबहादुर दुबै उस्तै उस्तै उमेरका हुन ।
पहिलो श्रीमानसगँ करिव ३० वर्ष अघि छुट्टीएर बसेकी राममाया दिदिको घर तथा कहिले माइती तिर बस्दै आएकी थिइन । प्राय दिदिको घर ईन्डिया तिरै बस्दै आएकी राममाया दाजुभाईको घर आएको बेला कृष्णबहादुरसगँ चिनजान पछि दाजुभाइहरुकै सल्लाह अनुसार बिबाह गरिन । भुपु इन्डियन आर्मी रहेका कृष्णबहादुर सुनुवारको पनि पहिलो श्रीमती बितेर एक्लै थिए । दुबै जना उस्तै उस्तै भए पछि एक अर्काको सहारा हुन्छ भन्ने सोचले बिबाह उनिहरुको परिवारकै सल्लाह अनुसार भएको राममाया बताउँछिन ।
ईन्डिया कै देहरादुन घर भएका कृष्णबहादुर पनि आफ्नो दाजुभाइको घर नेपाल आएको बेला दुबैको परिवार बिच सहमति मै बिबाह भएको राममायाको भनाई छ । दाजुले नै सामान्य टिकाटालो गरेर पठाए पछि ४ दिन आफुहरु सगैँ बसेको उनले बताईन । ४ दिन पछि पुन दाजुकै घरमा दुबै जना आए पछि कृष्णबहादुरले घर देहरादुन जाने भनी दुबै जनाको टिकट पनि ल्याएको राममाया बताउँछिन । बिबाह गरि पुन दाजुको घरमा अब देहरादुन जान भनी बिदा माग्न आफुहरु आएको उनले बताईन ।
त्यहाँ आएपछी इन्डिया जाने टिकट पनि कृष्णबहादुरले ल्याए । त्यसपछी भने आफू आफ्नो सामान लिएर आउछुँ भनी सल्लाह गरेर नै हिडेका अहिलेसम्म नफर्किएको राममायाको भनाई छ । गत असार ९ गते उनिहरुको बिबाह भएको थियो । १८ गते इन्डिया जाने टिकट उनिहरुको थियो तर सामान लिएर भोलि आउँछु भनी आफ्नो आफन्तको गएका कृष्णबहादुर असार १६ गतेबाट फरार भएको राममाया बताउँछिन । घरबाट हिडेको केहिदिनमा भने आफ्नो दाजुलाई फोन गरेर आफू ईन्डिया आइसकेको भनी जानकारी गराएको पनि उनले बताईन ।
उनी ईन्डिया पुगेको भने फोनमा बताए पछि भने अहिलेसम्म फोन पनि नलागेको राममायाको भनाई छ । बुटवल नै घर भएका कृष्णबहादुरका भाईले भने दाइ आउने भनी आफुहरुलाई बताए पनि अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नभएको उनले बताइन । आफुलाई देहरादुनको घर पनि थाहा नभएको उनको भनाई छ । तर देवरलाई भने घर थाहा भएको तर उनले भने दाइ आउनुहुन्छ भन्दै आफुहरुलाई टार्ने गरेको बताईन । करिव ३० वर्षसम्म एक्लै बसेको र बुढेसकालमा एकअर्काको सहारा हुन्छ कि भनेर बिबाह गरेको उनले बताईन ।
कठै ! क्याफे लान्छु भनेर कोठा लगी ब लात्कार गरे,अहिले यी युवतीको यस्तो छ हालत